MP4 iDVD: Sida loo Beddelaan MP4 in iDVD ama DVD on Mac (Mavericks ka mid ah)
Mararka qaarkood waxaan iman karo guud ahaan xaaladda in iDVD ma aynu si ku eegaan files MP4 our at dhan. Dhab ahaantii, ma dhammaan faylasha MP4 la soo gelin karo iDVD. MP4 waa qaab video ah oo ka duwan in codecs video. Haddii MP4 videos aad ku guul darreysato in lagu daro galay iDVD, sabab waayo, kanu waa badan tahay in codec gudaha ma aha in aynan iDVD. Maqaalkani waxa aad ku talin doonaa qalab awood badan si ay kuu caawiyaan. Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo MP4 in iDVD qaab socon, ama u isticmaalo sida kale weyn iDVD si toos ah gubi MP4 in DVD.
Best iDVD Converter MP4 oo kale iDVD
• MP4 badalo si iDVD, iPhone, iPad, iMovie iyo QuickTime taageeray codecs video effortlessly.
• Gubashada MP4 DVD in si toos ah la dhisay-in template DVD menu ee mawduucyada kala duwan.
• Ku dar metadata (sharaxaad, cover filim, comment, iwm), samaynta video oo macmal ah ama soo bixi Internet sida hal bixisay.
• Samee adiga kuu gaar ah filim Hollywood adigoo isticmaalaya function weyn video tafatirka si kor video.
• gubashada aan la aamini karin iyo xawaaraha converision Wabiyo shaqadaada.
# 1 Sida loo badalo MP4 in iDVD ay taageerayaan qaab
# 2 Sidee si ay u gubaan MP4 DVD inay si toos ah ula arrimo menu
Wondershare Video Converter u Mac kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo MP4 la iDVD-aqlka video codecs in iDVD-aqoonsan video codecs effortlessly. Ka dib markii diinta, kuwaas oo files MP4 aqlka la keeno si guul leh karaan in ay iDVD u DVD gubashadii dheeraad ah. Waxa kale oo aad xalin karo incompatibility MP4 kasta oo alaabooyinka kale ee Apple sida Lugood, iPhone, iPad, iPod, iMovie iyo QuickTime iwm
Tallaabada 1 Import MP4 video
Waxaad kaliya jiidi karaan jeedi MP4 video galay codsigan. Ama waxaad riixi kartaa ah "+" button xitaa ku dar file MP4 aad.
Tani MP4 in Converter iDVD taageertaa diinta Dufcaddii, sidaas waxaad ku dari kartaa files badan intii suurto gal.
Tallaabada 2 Set iDVD sida qaab wax soo saarka
Waxaad dooran kartaa iDVD sida MP4 qaab aad wax soo saarka video in ay leeg- tahay qaab wax soo saarka. Waxaad riix kartaa "ayeey" ka dibna maraan si ay u doortaan iDVD.
In tab tafatir ah, waxaa jira dad badan oo ay ka mid yihiin presets iMovie, Pro Goo Final, Prores iyo in ka badan. In tab Qalabka, waxaad dooran kartaa iPhone, iPad, Apple, TV, iwm Sidoo kale waxaad ka arki kartaa in codsigan taageerada diinta video kala duwan iyo qaabab audio ee Video iyo Audio tabs.
Tallaabada 3 Start si loogu badalo
Ka dib dejinta qaab wax soo saarka sida iDVD, fadlan kaliya ku dhuftay button diinta ku saabsan xaq hoose ee interface ka. Haddii aad rabto in aad wada midowdo aad keeno video clips, kaliya ka fiiri "midowdo All Videos" button. Diinta video Tani waxay ka shaqeeya 30X xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan. Waxaad ku dhameysan kartaa diinta aad files in dhawr miridh.
# 2 Sida loo gubi MP4 DVD in la arrimo menu kala duwan
Si aad u gubi MP4 in DVD disc ah, Wondershare Video Converter waa ka wanaagsan tahay iDVD. Sidaa daraadeed, ma aha in aad u baahan tahay in ay la kulmaan dhibaato madax leheyn ee. Just u dajiyaan oo ha DVD Creator smart si lagaaga caawiyo in aad si fudud oo dhaqso gubi DVD. Oo waxay bixisaa badan oo menu DVD qabow iyo qaar ka mid ah qalabka tafatirka caadi ah in laguu ogolaado in aad u gubi DVD ah shakhsi aad video leh, iyo tan iyo sawiro iyo music. Oo weliba waxaa MP4, waxa kale oo aad ku gubi karaa dhamaan qaabab video inay DVD si toos ah app this.
Kadib markii ay Video Converter Ultimate, interface default waa in diinta video. Fadlan guji "Guba" tab on sare ee interface ka. Ka dibna si fudud u jiidi jeedi video waxaa.
Dooro foom oo aad doonayso inaad menu ka mid ah liiska hoos-hoos ugu hooseysa ee suuqa kala barnaamijka.
Haddii aad jeceshahay in aad la shakhsiyeeyo video, riix "Edit" on video ah laga keeno si jar, noola aad video, ama ku darto Cinwaan, saamaynta iyo watermark in ay.
Tallaabada 2 Guba MP4 in DVD
At sare ee interface ah, fadlan dooro in Guba ama Copy DVD. Ka dibna dooro si ay u gubaan video inay DVD cajalid, DVD Folder, .dvdmedia, ama file ISO. Taas ka dib, waxaad riixi kartaa batoonka Gubashada dhinaca midigta hoose ee interface ay u bilaabaan si ay u gubaan.
Daawo tutorial video hoose ee Windows
Sidee ayaan u isticmaali karaa Adobe Ciyaar lagu shido DVD A?
Video inay Flash Encoder - Beddelaan Video inay Flash
MTS Converter - Sida loo rogo ama MTS in ku dhawaad ​​qaab kasta ee Mac / Windows
Free QuickTime Alternative: Play kasta Video Flawlessly
Jabbuuti oo Converter: Sida loo rogo ama ku dhawaad ​​kasta Video inay Jabbuuti File
> Resource > Beddelaan > MP4 iDVD: Sida loo Beddelaan MP4 in iDVD ama DVD ee Mac (Yosemite ka mid ah)